ငွေစာရင်း | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ငွေစာရင်း
သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်ကိုရှာဖွေဆုံးဖြတ်ခြင်းအမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်. ဒီနေရာတွင်တစ်ကြိမ်သင်သည်ရည်မှန်းချက်များထဲမှခြေလှမ်းဆီသို့ဦးတည်ရွှေ့ကူညီဖို့အချို့သောအကြံပေးချက်များများမှာ.
အားလုံးမီးသတ် Safe အကြောင်း
Safe အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများအဘို့ခိုးယူသို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတစ်ခုအပိုအဆင့်ကိုပေး, ကွန်ပျူတာဒေတာများနှင့်နေအိမ်နှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်နဲ့အခြားတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများ. မီး Safe မီး-ခံနိုင်ရည်ထက် fireproof များမှာ, သူတို့နောက်ဆုံးမှာမီးတောက်မှအရှုံးမပေးအဖြစ်. သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဝေးမှာအနီးဆုံးမီးဘူတာမှဖြစ်ပြီးမီးသညျ့ပူမဟုတ်လျှင်, သင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမီးတောက် withstanding မျှပြဿနာရှိသင့်. မီး-ခံနိုင်ရည် insulator တွင်လည်းနှငျ့ပွညျ့စုံကွောငျးဆွန်းစာရွက်သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့, မီး Safe သင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများကိုကာကွယ်တစ်ခုအလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်.
ထိပ်တန်း 2008 ပြန်ပရို
မူလစာမျက်နှာစျေးကွက်အရပျမှာလုပ်ငန်းခွင်အတွက်အစီအစဉ်များ၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုမှာပြန်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပါသည်. ငါကအတိတ်ကာလကိုကျော်ဝေးနေဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်ကိုခဲ့ပြီငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေကိုသိရ6လများ.
niche စျေးကွက်. ဘာလဲနှင့်ငါ့ထံသို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဤဆောင်းပါးသည်ဤမေးခွန်းများကိုဖွကွေားနှင့်ပိုပြီး.
ငါပိုကောင်းအင်တာနက်အိမ်အနည်းငယ် based စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ebooks ကြည့်ယူ. ထွက်ရှိပါတယ် rehashed နှင့် / သို့မဟုတ်ထွက်ခေတ်သတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိပါတယ်. ငါတှေ့3သင်သည်သင်၏ခေါများအတွက်အများဆုံးပေါက်ကွဲသံကြီးအားငါပေးမည်သောအကောင်းဆုံး.
အလုပ်၏ဤအမျိုးအစားကိုပူဇော်သက္ကာဘို့များစွာသောအစီအစဉ်များရှိပါတယ်, သင့်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်၌ထိုင်နေစဉ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဝင်ငွေဖန်တီးနိုင်သည့်. ပိုများသောတခုထက်ပိုသောလူတွေကအိမ်ပြန်အလုပ်မှာမှရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤအသက်တာ၏အဲဒီမှာအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အိမ်မှာပိုပြီးအချိန်ရှိသည်ရန်ဆန္ဒရှိသူအများအပြားအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်နဲ့တူပုံရသည်.
အများစုကရိုးရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနိုင်ပါတယ်. သငျသညျစျေးသိပ်မကြီးတဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်အခမဲ့ချင်တယ်ဆိုရင် သို့ဖြစ်. တစ်ဦးက Web based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးပြီးကြိုးစားကြည့်. သငျသညျကွီးစှာသောစျေးကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုငျသောတိကျသောအာရုံနှင့်အတူမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကိုဒီဇိုင်းဖန်တီးကူညီပေးဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်အများအပြားအခမဲ့ tools တွေရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးထုတ်ကုန်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရှိသည်ဖို့မလိုချင်ကြဘူးလျှင် Affiliate အရောင်းရဆုံးသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ. သင်သည်သင်၏ web site ကိုပြည့်စုံရှိသည်နှင့်ထို့နောက်သင့်သော့ချက်စကားလုံးများနှင့် SEOs အသုံးပြု. အသွားအလာမြင့်မား volumes ကိုတိုပြီးတာနဲ့ ...
မဆိုလက်လီကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကုမ္ပဏီ၏အရှိဆုံးအလေးပေးဌာနဖြစ်ပါသည်. ဘေးဖယ်ပြည်တွင်းရေးမူဝါဒကန့်အသတ်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အနေဖြင့်, သူတို့သည်လည်း irate နှင့်မကျေနပ်ဖောက်သည်ရင်ဆိုင်ရနှင့် placate ရန်ရှိသည်. သူတို့ဘာမှမနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုပြုနိုင်သည်ကိုမြော်လင့်သောသူတို့အဘို့အမှုအရာအခက်အခဲစေသည်.
ငွေထဲသို့ e-mail ကိုဖွင့်
လူတွေသန်းပေါင်းများစွာနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ e-mail ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ပေးပို့. သင်တစ်ဦးငွေသားမီးစက်သို့ဤလွယ်ကူသောအလုပ်ဖွင့်နိုင်မည်ဆိုပါကသင်မည်သို့ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်? ကောင်းပြီအင်တာနက်ပေါ်ရှိအနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများမှဒီဖြစ်နိုင်သောအောင်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ.
Computer ကိုငွေ Generator ကို
လူအတော်များများဟာဝင်ငွေရရှိရန်အင်တာနက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရရှိသည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် access ကိုအသုံးပြုနေသည်. သင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးကိုနေအိမ်အခြေပြုစီးပွားရေးကိုဖန်တီးရန်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ကနေအလုပ်လုပ်နေငွေသားထုတ်လုပ်ဖို့? ဟုတ်ကဲ့, များစွာသောလူပြီးသားကမ္ဘာကြီးကိုအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်နေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်နေကြ.
အွန်လိုင်းပေးဆောင်စစ်တမ်းများအများကြီးဝယ်လိုအားနှင့်အတူအွန်လိုင်းမှဈေးဖြစ်ပါသည်. အတော်များများကအသစ်ရောက်ရှိလာသောအခြို့သောအပိုဝင်ငွေအတွက်မျှော်လင့်အတူပူးပေါင်းနေကြ. သူတို့တစ်နေ့တာအလုပ်အစားထိုးမျက်နှာသို့အပိုဝင်ငွေသို့မဟုတ်အလုပ်ကိုနိုင်အောင် Daily သတင်းစာကလူစစ်တမ်းများယူနေကြသည်.
လှံတံ Stinson Make ရန်ကဘယ်လိုပြောပြ $500 တစ်နေ့သို့မဟုတ်ပို – ကြောင်း Right- $ 500 တစ်နေ့
အဘယ်အရာကိုဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်အောင်နေသည်, အချို့ကနဦးအားထုတ်မှုပြီးနောက်ကြောင်း, သင်ရုံနောက်ကျောကို တင်. ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့အလုပ်ပြုစေခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်တစ်ခုဝင်ငွေစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်. သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်, အများစုပြုပါ, အခြို့သောအပိုဆောင်းအားထုတ်မှုန့ ်. နှင့်တစ်ဦးအလွန်အဆင်ပြေဝင်ငွေအောင်. အတော်များများကအိမျကနေငွေသားဝင်ငွေအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တွေ့ကြပြီ.
စစ်တမ်းများအဘို့အ Paid Get – ဆန်းစစ်ခြင်း
ဤသည် piad စစ်တမ်းများ၏သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ဦးကကြိုးမဲ့ကုန်သည်အကောင့်သွားလာရင်းစဉ်အကြွေးငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရန်သင့်အားဖွင့်ခြင်းအားဖြင့် 21 ရာစုသို့သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်. သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်တစ်ဦးကုန်သည်အကောင့်အတွက်အတည်ပြုပြီးတော့ဖောက်သည်ထံမှအကြွေးငွေပေးချေမှုစုဆောင်းသူကိုဝန်ထမ်းအားဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်တည်နေရာကနေသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ကြိုးမဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ် Processor ကိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ငှားရမ်းရနေသည်. ဒီနေရာတွင်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုင်. 1. p တစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုန်သည်န်ဆောင်မှုပေးသူရှာတွေ့သဖြင့်ကြိုးမဲ့ကုန်သည်အကောင့် Apply ...
ကြားတွင်ကြောင့်ဝေးအွန်လိုင်းဥစ္စာဓန Creating. သငျသညျယနေ့အပိုငွေရှာစတင်နိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်အတိအကျလေ့လာပါ.
Webloyalty သူတို့ရဲ့ clients များဆုများနှင့်, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, e-commerce ကိုပံ့ပိုးပေးသူနှင့်အတူကပ်ခြင်းနှင့်သူတို့တန်ဖိုးရှိသောထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေးခြင်းဘို့မိမိတို့ client များ '' ဖောက်သည်.
ဒါကစီးပွားရေးလောကအတွင်း franchise ၏အရေးပါမှုကိုသရုပ်ပြအနေနဲ့သိကောင်းစရာများဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းရရှိရန်မည်သို့အကြံပေးချက်များပါရှိသည်
ပွင့်လင်းလက်နက်နှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများကိုဖမ်းဆုပ်မကြာခဏတကယ်လုပ်ဖို့ထက်အကြောင်းပြောဆိုရန်လွယ်ကူသည်. လူအများစုဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကြွယ်ဝတဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်ပေမယ့်အမှန်တကယ်ကအကြောင်းဘာမှလုပ်နေတာဘယ်တော့မှရှာတွေ့. တစ်ဦးကအခြိနျဆှဲ၏ပေါင်းစပ်နှင့် syndrome ရောဂါသင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုဝိညာဉျကိုသတ်ရန်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုဆိုလိုတာလိမ့်မယ် '' လျှင်အဘယ်အရာကို '' တစ်ဦးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်.
ကမ္ဘာ့ဖလားဆန့်ကျင် Zoran – အကူးအပြောင်းအတွက်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု
နည်းပညာ, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဘော်လကန်ထဲမှာအများဆုံးအဆင့်မြင့်ပုံနှိပ်စက်ရုံဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာနီးပါးကုန်ကျ $2.5 သန်း. ဒါဟာထက်နည်းတစ်နှစ်အတွက်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်. ထိုသို့ဖုန်-ဆင်းရဲသားများနှင့်စစ်ဘေးမက်ဆီဒိုးနီးယား၌တည်ရှိ၏.
တစ်ဦးကရိုးရိုး Get Rich လျင်မြန်စွာ Idea
Emmerson ၏နေိုငျသောစကားများအတွက်, "ငါလိုအပ်သမျှတဦးတည်းအယူအဆဖြစ်ပါသည်" နေ့ချင်းညချင်းချမ်းသာကြွယ်တစ်ဦးအခြို့သောအမည်းစက်ရှိပါတယ် "အသိဉာဏ်ရှိသော" လူများခံနိုင်ရည်ဖြစ်ဟန်. အဆိုပါရငွေရတတ်သောသူအမြန်အမျိုးမျိုး၏စိတ်ကူးလူမျိုးမျက်စိ alot အတွက်လှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့်ကဲ့ရဲ့၏ object တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, အနည်းငယ်အာရုံစိုက်အရေးယူမှုနှင့်လက်ျာအသိပညာနှင့်အတူ, လျင်မြန်သောစည်းစိမ်ကိုသင်တို့အဘို့မသာဖြစ်နိုင်, ဒါပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ဘို့မလွှဲမရှောင်. ငါလုပ်ချင်ပထမဦးဆုံးအရာဟူမူကားနေဖြင့်အထက်ပါအရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ပါသည် "လျင်မြန်သော" နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုလိုတယ် ...
တစ်ဦးကဘွဲ့လွန် CV ကိုရေးပါရန်ကဘယ်လို
အဟောင်းကိုစကားပုံ "သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအစှဲစေရန်တစ်စက္ကန့်အခွင့်အလမ်းရဖို့ဘယ်တော့မှ" ဒါကြောင့်အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းမှကြွလာနှင့်သင့် CV ကိုသင်တစ်ဦးအလားအလာအလုပ်ရှင်အထင်ကြီးရပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းအခါလုံးဝမှန်ပေ. လူကြီးမင်း၏ CV ကိုဂရုတစိုက်သာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ် အကယ်. သင်ကတစ်စက္ကန့်အခွင့်အလမ်းရဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်သည်.
စနစ်တကျအခြေချ၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်သူတွေကိုတစ်ဦးငွေသားပေးချေမှုများအတွက်အခြေချနေထိုင်အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုရောင်းဖို့အတှကျဒါဟာအဆန်းမဟုတ်ပါ. စနစ်တကျအခြေချရောင်းချနေများအတွက်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားပေမယ့်စနစ်တကျအခြေချဘို့ငွေရယူဘို့လုပ်ငန်းစဉ် America မှာအားလုံးပြည်နယ်များကိုဖြတ်ပြီးပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်.
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအင်တာနက်ကိုပထမဦးဆုံးစတင်တဲ့အခါမှာ, ကိုယ့်အကြောင်းကိုလူတိုင်းသူတို့ခုန်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာ-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းနိုင်ထင်. အဘယ်ကြောင့်မရ? အဆိုပါအကောင်းမြင်မျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးကနေအိမ်-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်နှစ်သက်သောသူတွေနဲ့အတူဖြစ်ကြီးမားအချိန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးနိုင်ပါသည်, သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုက်, သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအလုပ်နှင့်သူဌေးမှအခက်အခဲစရာမလိုဘဲကောင်းတစ်ဝင်ငွေရရှိ. နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ, ကိုယ့်အကြောင်းကိုအားလုံးကိုအွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်သူတို့၏နေအိမ်များတွင်ခမ်းနားဆက်ခံခဲ့သူကလူကိုသိ ...
Web ကို Conferencing န်ဆောင်မှုများပြန်လည်ရောင်းချခြင်း: Web ကိုခုနှစ်တွင်အဆိုပါလာ Boom မှစ. အမြတ်အစွန်းနည်း & Video Conferencing
သငျသညျတခုအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာငွေရှာချင်တယ်ဆိုရင်, ပြီးနောက်သင်လတ်ဆတ်သောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်, -to-date တက်နှင့်မိတ္တူ-ကြောင် affiliates ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူသေခြင်းသို့ရိုက်နှက်ရသေး. Web ကိုနှင့် video conferencing အတော်လေးသစ်ကို applications များဖြစ်ကြသည်, နှင့်အွန်လိုင်း conferencing ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးပြန်လည်ရောင်းချသူများဖြစ်လာကို start up ဒါမှမဟုတ်ပြီးသားရှိပြီးသားအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှထည့်သွင်းဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ရဲ့ online စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဤအမျိုးအစားများအတွက်အလားအလာမှာကွညျ့ကွစို့. ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, ဝဘ် ...
Little ကလုပ်ငန်းခွင်နှင့်အတူချမ်းသာကိုရယူလိုက်ပါ? ဤတွင်ကိုဘယ်လိုဖွင့်
သငျသညျရှေ့တျော၌ရှိသမျှသောသတိပေးချက်များကြားဖူးတယ်. get ကြွယ်ဝသောလျင်မြန်အဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာရှိတယ်. ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောအသံပါလျှင်, ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဖြစ်ပါသည်. ဘယ်အလုပ်ကိုမျှလိုအပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါတယ် အကယ်., ငါကတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်. သငျသညျအလွန်စပ်စုမဟုတ်ခဲ့လျှင်, အလွန်ခဲယဉ်းစဉ်းစားကြဘူး, နှင့်သင့်ပတ်လည်ကြည့်ရှုဖို့မသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစား, တကယ်တော့အဖြစ်သမားရိုးကျပညာ၏သူတို့အား-bits လကျခံဖို့တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်ရဲ့. သငျသညျအစိုးရလက်ကမ်းစာစောင်များသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်စကားကိုနားထောငျပါလိမ့်မယ် (အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစိုးရလူတွေကြွယ်ဝသောရတဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိခဲ့ဘူးသည့်အခါကတည်းက)...
သင်တစ်ဦးဆရာများ၏ဦးဆောင်အောက်ပါဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပုံကိုလေ့လာပါ. သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်သိကောင်းစရာများနှင့်အကြံပေးချက်ကို ...
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း ‘ မြန် Profits တွေပျော်မွေ့
မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းစီးပွားရေးသမားများဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်မဆိုအရှုံးခံခြင်းမရှိဘဲနိမ့်ဆုံးမှာသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းများကို fix ခင်မှာ, သငျသညျရောင်းဖို့အဘယ်အရာနှင့်တူအချက်များပေါ်တွင်သုတေသနသင့်တယ်, ရောင်းဖို့ရောင်းဘယ်သူကိုဖို့ဘယ်လို. ဤအအချက်များဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နေကြသည်ပြီးနောက်သင်ရောင်းချင်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို၏စျေးနှုန်းများကို fix သင့်တယ်. စျေးနှုန်းစစ်ပွဲအနိုင်ရလုပ်နည်း? စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အပေါ်တစ်ဦးကအနီးကပ်သုတေသနစျေးနှုန်းဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအား၏ရလဒ်ကြောင်းအကြံပြု. ...
ဤတွင် '' ကောင်ဆီဥကိုဖြတ် 'နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေသင်ကူညီအချို့အကြံပြုချက်များမှာ. သင်တို့သည်ဤအနည်းငယ်လျှောက်ထားလိုလျှင်, သငျသညျ သာ. ကွီးမွတျအမြတ်အစွန်းရရှိနည်းစိတ်ဖိစီးမှုဖန်တီးသင့်ရဲ့လမ်းအပေါ်ကောင်းစွာပါပဲ! 1. အဆိုပါ Slacker Cut! '' သေလွန်သောသူတို့သည်-အလေးချိန်န်ထမ်းကိုထမျး? ယခုသူတို့ကိုဆုံးရှုံး!'' အစဉ်အဆက်ဟောင်းယာကားဆွဲနေတုန်းတစ်မာရသွန်ပြေးဖို့ကြိုးစား? ဒါဟာအသုံးမကျသောနဲ့တန်ဖိုးရှိရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားဖို့ကြိုးစားနေနဲ့တူရဲ့ကားအဘယ်သို့ (သို့မဟုတ် unmotivated) န်ထမ်း. မသာသူတို့သည်သင်၏ bott တန်ဖိုးပေါင်းထည့်မည်မဟုတ် ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဒီရက်သောသူမည်သူမဆိုဖြစ်ကောင်းအင်တာနက်ကုန်သည်အကောင့်၏အကျိုးကျေးဇူးများစဉ်းစား. နောက်ဆုံးတော့, ကုန်သည်အကောင့်အတွက်လျှောက်ထားမြန်, လွယ်ကူသော, နှင့်များသောအားဖြင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့, အချို့သော underwriters အွန်လိုင်းမှလျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်း၏အခွင့်ထူးဘို့ကိုအားသွင်းပေမယ့်. တစ်ဦးကကုန်သည်အကောင့်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအနေဖြင့်လက်ခံခရက်ဒစ်ကဒ်ငွေပေးချေ၏နည်းလမ်းများကမ်းလှမ်း, နှင့်ဤများစွာသောလုပ်ငန်းရှင်များ ပို. ပို. တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ရှာတွေ့နေကြပါတယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်. သုတေသနကွောငျးဖျောပွ Mor ...
အလုပ်အကိုင်အမြင့်တက်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်, ဆွဲဆောင်မှုလျော်ကြေးငွေ packages များနှင့်လစာအဆင့်ဆင့်မှပြန်လာ. ငွေကြေးဖောင်းပွမှုစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်၏ပုံမှန်နှင့်အကြမ်းဖက်အပေါ်စစ်ပွဲ၏အစအဦး၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်သောအလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်တွင်ချနှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာ, အလုပ်ရှင်များကိုဆက်ကပ်အပ်နှံန်ထမ်း drawing တစ်ခုမျက်စိနှင့်အတူနစ်နာကြေး packages များဆောက်လုပ်နေကြသည်. နှောင်းပိုင်းကိုးဆယ်များ၏စီးပွားရေးပူဖောင်းစဉ်အတွင်း, အလုပ်ရှင်များဖြစ်ကမ်းလှမ်းရန်အချင်းချင်းဦးခေါင်း-to-ခေါင်းကိုယှဉ်ပြိုင်မှုရှိကြ၏ ...
'' လောဘကောင်းမွန်သော Is’ ‘ လုပ်ခ, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အဖွဲ့
ယူအက်စ်အေအတွက် 1980 ခုနှစ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်နိုင်ငံတကာကအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအခြေခံပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆုလာဘ်အပေါ်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလေးပေးထား. ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အစွန်းရောက်ဥပမာလောဘကောင်းသည်ကိုဖျောပွက Wall Street မှာရှိတဲ့ဂေါ်ဒွန် Gekko ခဲ့သည်. 90 ရဲ့, သို့သော်, တစ်ဦးစေ့ဆော်မှုအဖြစ်လုပ်ခ၏မသင့်လျော်အသုံးပြုစိတ်ဒဏ်ရာနှင့် bankrupted ကုမ္ပဏီများသည်မြင်ကြပြီ. သို့သျောလညျးကိုအဓိကကော်ပိုရိတ်အောင်မြင်မှုတွေဆုလာဘ်အခြေစိုက် remunera ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပြီ ...
အဘယ်ကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများအရေးကြီး Are: တစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
စာရင်းကိုင်လူရဲ့ဘဏ္ဍာရေးရေးရာစောင့်သောသူတို့သည်သေးရှုပ်ထွေးလိုအပ်သောအိမ်မှုဝေယျာတဦးဖြစ်အတော်လေးစင်ကြယ်သောစဉ်းစားသည်. ပဲစတင်သူအစပြုသူများအတွက်, ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပထမဦးဆုံးအတားအဆီးမဖြစ်စေခြင်းငှါ. ခဏခဏ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလှည့်ပတ်အလုပ်လုပ်သောစာရင်းကိုင်နှင့်ထိုအသုံးပြုသောအထူးဘာသာစကားနားလည်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, တဦးတည်းအပေါ်င့်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်ဗန်းစကားမှတဆင့်ကူးရမယ်. စာရင်းကိုင်များ၏နားလည်မှုရရှိမှုအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း con ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
ဖြန့်ဖြူးသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောငွေချေမှု – Digital ခက် Copy ကူး, Delivery စာရွက်စာတမ်းများအထောက်အထား
ဖြန့်ဖြူးပိုမြန်အငြင်းပွားငွေတောင်းခံလွှာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်, Hard-မိတ္တူပြောင်းလဲလာသောအခါ, ဒစ်ဂျစ်တယ် format ကိုသို့ပေးပို့စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထား.
တစ်ဦးကနေအိမ်စီးပွားရေးအဆိုပါအိမ်ရာပူဖောင်း မှစ. သင်ကကာကွယ်ပါနိုင်ပါစေဘယ်လို
လူတိုင်းမတစ်ခုလုံးစီးပွားရေးကိုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ရာပူဖောင်းလည်းမရှိသဘောတူ, ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့တခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တစ်ခုအကြောင်းကို? သင့်အိမ် devalued ခဲ့လျှင်, ပင်ယာယီ, သင်သည်သင်၏အကြွေးရေရှည်တည်တံ့သို့မဟုတ်သင်ကြွေးမြီသို့ရတဲ့မပါဘဲသင့်အိမ်ရောင်းဖို့ခွင့်ပြုပါရန်ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုကြပါဘူး? US မှာယနေ့, များစွာသောလူတစ်ဦး loosing ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေမှာသူတို့ကိုနေရာချထားသောနေအိမ်များတွင်နေထိုင်. ဘယ်လိုအိမ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားကိုတိုးတက်စေနှင့်အိုးထဲကနေသင်ကကာကှယျပေးနိုငျ ...
ငွေတောင်းခံလွှာ Factor ၏သမိုင်း
factoring လူသိများအသက်အကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အထများတစ်ခုဖြစ်သည်. ကျနော်တို့ကရှေးရောမအင်ပါယာ၏အချိန်အဖြစ်ကအနည်းဆုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့သုံးခဲ့ကွောငျးသိရ, ကုန်သည်ကုန်သွယ်မှုအကြွေးတွေအခြေချနိုင်ရန်အတွက်စုဆောင်း၏အကူအညီလိုကျသောအခါ. Factor ရှည်လျားသောသမိုင်းများအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူ့ဟာသူအတွက်အလွန်အခြေခံအကျဆုံးပြဿနာအမှာစကားဖြစ်ပါသည်: ငွေလည်ပတ်မှု.
တစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ဤသို့ငွေရှာပေးနေအခွင့်အလမ်းများကို၏မိုင်းဗုံးကွင်းနှင့်အတူရိုးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းပြန်လည်သုံးသပ်, ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိထိပ်အရောင်းရဆုံးအစီအစဉ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ. သူတို့ကတိပေးအရာအားလုံးကိုမကယ်မလွှတ်ပါနဲ့?
Accounts ကို receiver Factor များအတွက်စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ: အခြားအကိုအကြွေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနဲ့သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာ-to-နေ့ကငွေသားစီးဆင်းမှုအခြေအနေသတ်ကြောင်းမဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း. သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်မ: လစာအဖုံးဖုံးမှ '' ငွေ? လောင်စာဆီကြီးထွားဖို့ '' အလုပ်အဖွဲ့မြို့တော်? '' ငွေ Flow ပြဿနာများနှင့်အတူကိုကူညီပါ? '' ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဏ်ပြန်လာ Down ၏အကူအညီသို့မဟုတ်လက်ရှိလိုင်းများတိုးချဲ့ဖို့ငြင်းဆန်? တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ '' နယူးပစ္စည်း? အဘယ်အရာကိုတွက်နေသည်? ရိုးရာ factoring ဆိုက်ရောက်အတွက် ...
လှံတံ Stinson ရဲ့အခမဲ့ Teleseminar Make ရန်ကဘယ်လိုထောင်ချီဖေါ်ပြသည်သည် $500 တစ်နေ့
အမြင့် Volume ကိုကုန်သည် – သငျသညျတစျဦးကလိုအပ်ပါသလား?
သင့်လုပ်ငန်းကအီလက်ထရောနစ်အသက်အရွယ်သို့ရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှိရာအမှတ်ကြီးထွားလာသည့်အခါ, သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီရဲ့အလားအလာချဲ့ထွင်ရန်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့အခြို့သောအတှေးပေးသင့်. တစ်ဦးကကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အွန်လိုင်းဖောက်သည်ခရက်ဒစ်ကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာများကိုဒေသခံတစ်ဦးကဘဏ်သို့မဟုတ်အခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူမိတ်ဖက်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ကုန်သည်အကောင့် Creating သင် PR မှလည်ပတ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်စေမည် ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုငွေကြေးအမှားတွေသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားပေမယ့်သင့်ရဲ့အလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သန်မှုသာမှအန္တရာယ်ရှိသောနိုင်ပါတယ်. ယင်းအကြောင်းကိုအားလုံးလေ့လာပါ7သင်တစ်ဦးအမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာအကြောင်းကိုအလေးအနက်နေလျှင်သင်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်အရေးပါသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငွေကြေးအမှားတွေကို.
သင်ကသာမရှိရင် Live မပေးနိုင် franchise သတင်းအချက်အလက်
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းစတင်စဉ်းစား? ဤတွင်စတင်ရန်အချို့သောအရေးကြီးသော franchise သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ် ...
အပေးအယူ ‘ အဆိုပါစံပြစီးပွားရေးသဘောတူညီမှုရ
သဘောတူညီမှုညှိနှိုင်းပြီးနောက်ရောက်ရှိကြောင်းသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်. သဘောတူညီချက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပြည်သူများအကြားတစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကသဘောတူညီချက်နှစ်ခုပါတီများကိုလိုက်နာဖို့သဘောတူစာချုပ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. အပေးအယူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေသများအတွက်အလွန်ပျံ့နှံ့နေသည်, အရှင်ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေးအယူနဲ့တူဝေါဟာရများကိုနားကြားကြသည်, ဘဏ္ဍာရေးအပေးအယူနှင့်ပိုပြီး. အခြားကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူစာချုပ်အောင်နေစဉ်, သငျသညျသတိရသင့်ကြောင်းအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်. သင်သည်အခြားကုမ္ပဏီနှင့်အတူညှိနှိုင်းကြသောအခါ, အဆိုပါ si တာဝန်ခံယူ ...
ကောင်းစွာ, မရကယ့်ကိုငါ့အလျှို့ဝှက်ချက်များ, ကျွန်မလက်ရှိငါ့ကိုအမြတ်အစွန်းအတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောခွငျထောကြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားထဲကရယူနိုင်ပါတယ်သာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်. ငါကျော်နှင့်အတူအလွန်အောင်မြင်သောကို web content တွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ပိုင်ရှင်ရယ် 70 စာရေးဆရာများ။. ငါတစ်လ၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးယခုတွင်ငါသည်ငါ့အားဤသို့သောကြီးမားအောင်မြင်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီမှစတင်ကနေပြုသောအမှုဖွင့်အရာအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုမယ့်လမ်းညွှန်အတူတူချပြီးကုန်. ကျနော်တို့ဖြစ်စေနှစ်ကောင်၏စုံတွဲတစ်တွဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ကျနော်တို့ထောင်ပေါင်းများစွာပြောနေတာဖွင့်. ငါ၏အရူးသွပ်မှုဖို့နည်းလမ်း?
Scan ကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အာရုံစိုက် $$$
Web ကို Advertising ကြော်ငြာ၏အင်တာနက်ကို Banner Advertising ကြော်ငြာအများစုမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံစံ
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးနေအိမ် based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရှာ
စတင်ခဲ့သည်: တစ်ဦး Business Plan ဖန်တီးခြင်း
အိုင်တီ Outsourcing မဟာဗျူဟာအပေါ်ပညာပေးအာရုံစိုက်, ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်နည်းပညာ
ဆိုဒ်များတော့အရောင်း မှစ. ငွေရှာနည်း
ပြည်သူ့လိုအပ်သူကားအဘယ်သူပြည်သူ့ – သင့်ရဲ့ niche ရှာမည်
virtual assistant ‘ အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောသူ Work-မှာနေအိမ်အခွင့်အလမ်း
အဆိုပါ Ring ကိုနမ်း: အဆင့်ဆင့် Matters (It’s not what you think)
ယောဘသည် / လုပ်ငန်းခွင်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုစီမံကွပ်ကဲရန်တစ်ဦးကရွှေစည်းမျဉ်း
အမေ, သငျသညျအိမျတျောထဲက Get ထိုအခြို့သောငွေရှာလိုပါသလား?